Global Voices teny Malagasy » Fitroarana sy Tahotra Tao Timor Atsinanana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 19 Septambra 2017 4:42 GMT 1	 · Mpanoratra Preetam Rai Nandika Miranah
Sokajy: Azia Atsinanana, Timor Atsinanana, Ady & Fifandirana, Fanoherana, Foko sy Fiaviana, Mediam-bahoaka, Sendikà, Vaovao Mafana
Nipoaka tao an-drenivohitr'i Timor Atsinana, Dili ny herisetra androany.
Dili-gence nilaza hoe: 
Efa nitatitra ny famoaham-baovao mahazatra fa 2 no maty ary 21 naratra. Naharay antso an-tariby avy any amin'ny Timorey iray tao amin'ny faritra mafana ankehitriny ao Comorro izahay. Matahotra ny olona ary nahita setroka niakatra avy ao amin'ny faritra ny olona.
Nanome tsiny ireo miaramila voaraoka noho ny korontana ireo loharanom-baovaon'ny fampahalalam-baovao mahazatra. Miaramila 500 teo ho eo no voaraoka tamin'ny volana lasa teo rehefa nitsoaka an-daharana, manohitra ny tsy rariny tamin'ny fampisondrotana grady. Nanao fihetsiketsehana tao Dili renivohitra nandritra ny herinandro ireo miaramila ireo.
Na izany aza, tsy mieritreritra  izany i Sam ao amin'ny bilaogy Dili-Dallying:
Ny zavatra toa nitranga dia fanakorontanana niseho teo akaikin'ny tranoben'ny governemanta tao afovoan-tanàna, eo amin'ny iray kilaometatra miala avy eto. Nanimba fananana ireo tovolahy ary nandoro trano sy fiara. Tsy fantatra raha tafiditra ao anatin'ireo miaramila voaraoka miisa ‘591’, mpikambana ao amin'ny vondrona mpanao haiady (jiolahimboto) na kisendrasendra tafaraka ireo lehilahy ireo. Satria somary tony ny toe-draharaha nandritra ny herinandro raha nitondra-tena am-pilaminana ny ‘591’ , heveriko fa ireo andian-jiolahy no manararaotra ny toe-javatra saingy tsy azoko antoka. (Ny tahan'ny tsy fananan'asa ho an'ny tanora ao Dili dia 40% ary mampita ny fahadisoam-panantenany amin'ireo vondrona mpanao haiady ny tovolahy sasany.)
Dili-gence, mihevitra koa fa misy zavatra tsy ampy ny loharanom-baovao 
Ny teboka iray izay toa tsy nolazainy dia toa tsy misy ifandraisany amin'ny disadisa arak'asan'ny miaramila ny ampahany mahery vaika tamin'ny korontana. Ny fahafantarako azy dia ny fifandirana eo amin'ireo tandrefan'ny sy tatsinanana ao Timor-Leste (monu versus lorosae) no tena olana. Ny tena herisetra ao amin'izany toerana izany, toa nalain'ny tandrefana ny tanin'ny tatsinanana izay monina ao Dili ankehitriny (lasa an'ny andrefana i Dili faritra atsinanana amin'ny fizarana).
Bilaogera ao amin'ny tumbleweed in timor lorosae indray nanome tsiny ireo mpanely tsaho  mahatonga ny korontana.
Misy bokotra mampikoropaka mora pihana ao amin'ny Timorey, noho ny horohoron'ny herisetran'ny taona 99 mbola toy ny vao haingana an-tsain'izy ireo. Tsy afaka manome tsiny azy ireo ianao satria nisy namono ny rahalahiny, ny rahavavy, ny namany sy ny havan'izy ireo taloha ary lasibatry ny herisetra ihany koa ny tenan'izy ireo. Noho izany, isaky ny misy tsaho na tsy fetezan-javatra, dia mandositra any amin'ny havoana mba hialokaloka ny fianakaviana .
Ary fantatrao ve fa mahafantatra ity fahalemena ity ny olona sasany ary manararaotra izany. Mety manao fihetsiketsehana milamina ireo mpanao fihetsiketsehana saingy afaka mampiteraka tahotra mora foana na iza na iza, na olona iray na roa izay te hampiteraka korontana, handroba mba hahazo tombotsoa manokana na hanakorontana ny fitondrana amin'izao fotoana izao.
Nofaranan'i Dili-gence hoe:
Aleo lazaina fotsiny fa mitanondrika isika amin'izao fotoana izao.
Hoy i Sam:
Mbola henjana ny toe-draharaha. Naheno tatitra momba ireo olona mitoraka vato ao amin'ny Bis (fiara fitateram-bahoaka) mankany atsinanana ao Baukau sy Lospalos aho. Maro amin'ireo mponina ao Dili ihany koa no mandositra mankany amin'ireo havoana manodidina.
Tena demaokrasia marefo i Timor.
Diso fanantenana ihany koa i Tumbleweed
Tena tsy rariny ho an'i Timor izany! Mila fandriampahalemana isika amin'izao fotoana mba hampivoatra ny toekarena ary mila fitoniana. Ny zavatra FARANY ilaintsika dia izao zavatra ankehitriny izao!
Raha te hanampy an'i Timor ianao, ny zavatra voalohany tokony hatao dia ny mahazo ny zava-misy marina .. izay tena sarotra ihany koa. Ny tiako holazaina, raha nanoratra ity aho dia tao amin'ny birao, azo antoka sy voahodidin'ny mpiambina, tsy mahita ny toe-javatra ao ivelany aho ary miankina amin'ny tatitra avy amin'ny olona mibilaogy izany mihitsy aza.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/09/19/107143/
 nilaza hoe:: http://www.wombathole.com/dili-gence/?p=73
 tsy mieritreritra : http://samanddaniel.blogspot.com/2006/04/under-siege-in-dili.html
 mihevitra koa fa misy zavatra tsy ampy ny loharanom-baovao: http://www.wombathole.com/dili-gence/?p=70
 nanome tsiny ireo mpanely tsaho: http://timorsunshine.blogspot.com/2006/04/panic-button.html